I-Valley of the Waves - I-Sun City Resort eNingizimu Afrika
Umhlahlandlela Wakho Wokwazisa ku-Valley of the Waves eSan City Resort eNingizimu Afrika. Jabulela umndeni emanzini emagagasi okugeleza kanye nokugibela okuhlukahlukene nemisebenzi.Enhliziyweni yalokhu kuqhuma kwentaba yasendulo, ngokusho komlando, kwavela impucuko enkulu. Izindwangu zokuthanda ukuthula ezivela enyakatho zahlala kulezi zihlahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, lapho zakha khona iSigodlo sawo esithakazelisayo, esazungezwe ngamanzi amaningi agijima nezivande ezinhle.
Ngemva kokuzamazama komhlaba kwabhubhisa ikhaya labo, abantu babaleka futhi ekugcineni, iNqabayokulinda kanye nomuzi wayo yagcwala ngokuphelele.
Abavakashi bosuku - Valley of the Waves ngena mahhala
Izivakashi ezihlala kwenye yamahhotela e-Sun City, zithola ukufinyelela kwamahhala ku-Valley of the Waves.
Izivakashi zosuku kumele zikhokhe ukungena e-Valley of the Waves.
Abantu abadala (amahora angama-13 kuya ku-59): R185
Izingane (4yrs kuya ku-12 yrs): R90
Izingane ezingaphansi kwezingu-3: Ezamahhala
Izakhamizi eziphezulu (iminyaka engama-60 +): R85
* Amanani angashintsha ngaphandle kwesaziso
Zivakashi Zasemini- Qaphelani
R75.00 umuntu ngamunye kumele akhokhelwe yi-Adult & Child ngamunye lapho efika eSangweni Lamasango ngaphambi kokufika e-Valley of the Waves.
Lokhu kusho ukuthi izivakashi zosuku kufanele zikhokhe u-R75 ukuze zifake i-Sun City Resort bese zikhokha imali ehlukile yokungena e-Valley of the Waves (Bheka amanani afakwe ngenhla).
Siyabona Afrika ayithathi ukubhuka kweSuku lokuvakasha
Amaminithi weDayimane Negolide
Emva kokuzamazama komhlaba kwabhubhisa impucuko yasendulo, amadayimane amadayimane kanye nemigodi yegolide beyingxenye yezikhukhula futhi namuhla banikeza amanzi amnandi angaphansi kwamanzi njengoba aguqula phansi iSlide Hill.
I-Tarantula iyinto evusa amadlingozi - igubungelwe ubumnyama, ehlomile ngaphandle kweyodwa ngaphandle kwebhubhisi, wena ukhokha ngokusebenzisa iziteshi zendawo yezintaba ngejubane eliphefumulayo. Ukuqamba amanga akho okwesabisa ngumuntu ohlupha phansi entabeni ngemuva kwakho.
I Bridge of Time
Le bhuloho elihlaba umxhwele, eliqashwe yizindlovu ezinamandla, likhonza ukuxhumanisa iHholo loMcebo kuLost City Entertainment Centre ne Valley of Waves. Ukuze kuvikelwe ingcebo engalingani, okuyiyo efihliwe eHholo LoMcebo, i-volcano ehlakaniphile iqhuma njalo, ibangela ukubhema ne-lava ukuphuma ngaphakathi ngaphakathi ethempelini leNdalo.
I-Roaring Lagoon iyilungiselelo le-adrenaline junkie. Njalo imizuzwana engu-90, i-siren iyamemeza ukufika kokushaya kwezinzwa zakho. I-wavem ephezulu ka-1.2m enevolumu lama-35kms ngehora elibhekene nokudonsa olwandle olwandle olunomdanso olungabantu.
I-Red River Ride
Lo mfula ongaphansi komhlaba unomphela ongasondelene nesiqhingi sase-Valley of Waves ngamamitha angu-500, ethwele amalitha amabili wamanzi kanye nezingane ezijabulayo, ngokunciphisa ngobumnene imifula yamanzi ngamabhubhu agqamile.
Izinhliziyo ezinesibindi ziphonsa ngamamitha angu-17 phansi kwe-70 meter chute, zilimaze ngaphansi kwebhuloho bese ziphonsa echibini elikhazimulayo ngezansi - hhayi ngenxa yezinhliziyo eziphelile.
La masango amakhulu ayeqaphele ukungena eMfuleni, futhi angabonakala namuhla.
I-Monkey Spring Plaza ikhumbula isixuku sezinkawu, esasindisa isizwe sasendulo ekufeni ngenxa yendlala ngesikhathi sesomiso esibi.
Le bhuloho yayihlelwe yiNkosi ukuba ihlanganise labo abafisa ukulimaza iRoyal Family. Ihamba futhi iqhume njengoba igxuma umgodi wokugwedla phezu kwamanzi angena ngaphansi.
Ukuqhuma komhume ofihliwe
Landela umzila we-Hippo Gorge ukusuka ngaphansi kweRoyal Staircase kuya eMpumalanga Egwadule.
I-Royal Staircase ixhumanisa iSigodi sama-Waves esiya esigodlweni saseLost City nge-Old East Gate Bridge.
I-Adventure Path ihlobanisa amaHlathi Ezimvula ngaphesheya kweRoyal Staircase.
Gong we-Sun Lion
Le gong enhle yabalondoloza abantu basendulo ngokubabiza ekuphepha kweRoyal Arena ngaphambi nje kokuzamazama komhlaba kwabhubhisa imizi yabo.
Le midlalo enhle yakha indawo ekhangayo yamaqembu we-cocktail, ukuqaliswa komkhiqizo nezenzo zemidlalo yaseshashalazini.
Lezi zinhlanzi zaseRoyal, ezinamanzi amanzi abizwa ukuthi anegunya lokuphulukisa, zakhiwe phezu kwentwasahlobo yemvelo.
Ebhekene neLwandle Lokuthula kanye neChibi le-Waves, ukuphumula okutholakala kwamanzi kuyatholakala nsuku zonke kusukela ngo-10h00 kuya ku-18h00 ehlobo, kuze kube ngu-17h00 ebusika.
I-Mochachos ilungele kulabo abadinga ukudla ekugijimeni. Ukudla okusheshayo okusheshayo kuyatholakala kusukela ngo-10h00 nsuku zonke kuze ku-18h00 ehlobo nango-17h00 ebusika.
Itholakala kuma-ladies 'nezindlu zangasese ze-gents eceleni kweydijithali.
Ngonyaka u-Valley of Waves ivala isikhathi esifushane phakathi neBusika ukuvumela ukugcinwa kwepaki yakho yamanzi oyintandokazi ukuqinisekisa ukuthi zonke izakhiwo zisezingeni lokuqala. I-Valley of Waves (kufaka phakathi i-Amphitheater, i-Royal Observatory pool kanye neDungeon) izovaliwe ukugcinwa kwonyaka kusukela ngomhla ka-18 Meyi kuya ku-27 Juni.